Maleeshiyaadka Dowladda Oo Dad Shacab Ah Ku Dilay Deegaanno Katirsan Sh/hoose.
Tuesday May 08, 2018 - 21:07:15 in Wararka by Super Admin
Dilal qorsheysan ay saacadihii lasoo dhaafay siyaaba kala duwan uga dhacay deegaanno katirsan gobolka Sh/Hoose ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya degmada Baraawe ayaa sheegaya in maleeshiyaadka DF-ka ay ugu yaraan laba qof oo shacab ah ku dileen gudaha magaalada, Waxgaradka Baraawe ayaa warbaahinta u sheegay in dhalinyarada ladilay loo dhaadhiciyay saldhigga Booliska kadibna halkaas lagu dhax toogtay.
Taliyaha Booliska degmada Baraawe ugu magacaaban Dowladda Federaalka ayaa xaqiijiyay in ciidamadoodu laba qof ay dileen islamarkaana ay wadaan sababta loo dilay.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in howlgallo raaf ah oo ay sameeyeen maleeshiyaadka DF-ka lagu qabqabtay tobaneeyo qof waxaana walaac laga muujinayaan masiirka dadka laxiray.
Dhinaca kale weerar xalay ka dhacay duleedka degmada Awdheegle ee isla gobolka Sh/Hoose ayaa lagu dilay laba qof shacab ah, ilo wareedyo ayaa sheegaya in dilka ay geysteen maleeshiyaad kasoo amba baxay saldhigga ciidamada AMISOM ee deegaanka Lambar50.
Dadka ladilay oo ahaa xoola dhaqato ayaa Meydadkooda maanta duhurkii lagu aasay duleedka Awdheegle, maleeshiyaadkan dilka geystay ayaa bilihii lasoo dhaafay dhibaata daran ugeysanayay dadka deegaanka gaar ahaan xoola dhaqatada iyo Beeraleyda waxaana dhanka hubka ka taageeraya ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwan Uganda.